खडे सांसद | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 11/30/2009 - 17:17
खडे सांसद झगडे सांसद निकै नै बहादुर हुँ भन्दछ ऊ । उसलाई त न आश नत्रास । यसभन्दा अघि पनि उसलाई मन्त्रीपदमा लान कसैले मानेन । खुबी छैन त्यस व्यक्तिको, त्यति मात्र होइन सोमत पनि छैन । त्यसकारण ऊ जनप्रिय छैन तर पनि पहिल्यैदेखि त्यो त्यता, उता र उताबाट धेरैको सेवा गर्दै आएको मानिस हुँदा यसपटकको सुरिलो संसदमा त्यो पनि मनोनित भएथ्यो क्या ! धेरै हत्ते गरेर, साह्रै अत्तो थापेर काले शाहका कलवारहरूलाई खुशी पारी-पारी खाएकै थियो । अहिले मूर्च्छा पारिएको संसद फेरि बौरिएपछि त खडे संसदको दिन पो भएछ गाँठे ! अब त खडे पनि तगडे नै भयो नि होइन र !
अस्ति झँिगेटाएको झिक्रे पनि अएर के के भन्दै कराउन थाले छ । त्यहाँ पहिले खडे सांसद थिएन । यसले सम्झाउँदा झिक्रेले पटक्कै टेरेन । उल्टै सांसदहरूलाई गाली गर्दै तथानाम बोल्न थालेछ । त्यसैबेला खडे सांसद आयो, उसले उसको सातो खायो । त्यस व्यवहारले मात्र होइन पछि यस्तै गरी फुर्ती देखाउँछौ भने जेलमा पनि जानुपर्ला होस । गर ! भन्ने धम्कीसमेत थाहा पाएपछि झिक्रे चुपचाप भयो । उसले दिएको सल्लाह र निर्देशन अनुसार काम सबै सम्पन्न गर्यो, गयो पनि । त्यसपछि त झिक्रे कार्की निकै भक्त भएर खडे सांसदका पछि-पछि लाग्न पो थाल्यो । वास्तवमा सांसदका नाताले धाक धक्कु होइन मानवीय सेवा गर्ने खडे कडा सांसद हो ।
खडे सांसद शक्तिमा नगए पनि भक्ति र अनुरक्तिमा, र्फमभार सेवामा त निकै प्रबल मानिस हो । ऊ सफा हृदयको थियो नै । खडेको यस्तो व्यवहारले त्यहाँ धेरैले डाह पनि पो गरेका थिए त गाँठे । डाडेहरूको भाँडे चरित्र र त्यो व्यवहार अर्कै हुन्छ । उनीहरूले अर्कै रोल खेलेर के के गर्दै गए । आजको आँखामा नबिझाउने र शीतल बनिसकेको खडे सांसद एक दिन अचानक दुर्घटनामा पर्यो र पर्यो पनि । तर तरिकासँग मोटर फालेर कार्यसिद्ध गर्ने ड्राइभर जोगियो र भाग्यो पनि । खडे गाडी खसी खोलामा पर्यो मर्यो तर त्यस घटनाले धेरैको रहस्य भेदन पनि गर्यो । अब त्यस घटनापछि त खडे सांसद भनेको संसद प्रमुख प्रबल व्यक्ति पो भयो त गाँठे !
सुरुमा सियो बनी छिर्छ थाहै थिएन
मृत्यु संस्कारको परम्परा के कस्तो ? -त्रिचन्द्र प्रतीक्षा
यो साँझ यो सुवास
सपनाः शून्य बिहान
प्रेमवाद अविश्वास र अस्तित्व
कविहरू र सत्ता
लुकी लुकी हेरौं लाग्छ...
मेरो माइती र तिहार